Dzidziso kune jailbreak untethered kune iOS 8.1.2-8.4 | IPhone nhau
Dzidziso kune jailbreak isina kuiswa kune iOS 8.1.2-8.4
Pablo Aparicio | | Jailbreak, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Maminetsi mashoma apfuura yakaburitsa iyo jailbreak yeIOS 8.3 uye isu tatova nedzidziso yakagadzirirwa kuitira kuti iwe ugone kuiisa pane yako iPhone, iPod uye iPad. Maitiro acho akapusa asi, sezvo zvese zviri muchiChinese uye ndinofungidzira kuti hapana muverengi wedu anozvinzwisisa, unofanirwa kutora nhanho usati wawana. Luken (Kwaziso nekutenda futi).
1 Maitiro ekuita jailbreak iOS 8.3
1.2 Midziyo inoenderana
1.3 Matanho ekutora
Maitiro ekuita jailbreak iOS 8.3
Zvinogara zvichikurudzirwa kuita backup kopi yechishandiso chako kuti udzivise kurasikirwa kweruzivo.
Ita yakachena kudzoreredza zvingangoitika glitches.
Iwe unofanirwa kuregedza iyo yekuvhura kodhi (uye Kubata ID, kana iwe unayo) uye iyo "Tsvaga yangu iPhone" sevhisi.
Kana iwe ukawana iyo "Kuchengeta inenge izere" meseji, mhanyisa Cydia.
Kana iyo jailbreak ikakundikana, bvisa iyo WiFi woedza zvakare.
iPhone 6, iPhone 6 Uyezve, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 uye iPhone 4s
iPad Mhepo 2, iPad mini 3, iPad Mhepo, iPad 4, iPad 3 uye iPad 2
iPad mini 1 (chizvarwa chekutanga iPad mini), iPad mini 1 (Retina iPad mini), iPad mini 2
iPod inobata 5th chizvarwa
Isu tinodhawunirodha uye tinosunungura iyo jailbreak kubva HERE.
Isu tinobatanidza yedu iPhone kune komputa. Tichaona kuti inozviziva kwatiri.
Isu tinobvisa mapopcorn pazasi.
Isu tinobata bhatani girini.
Kune avo vane iyo iOS 8.4 uye iOS 9 betas yakaiswa, seApple iri kusaina iOS 8.3 uye isingaregi kuzviita kusvikira, pamwe, awa mushure mekuburitswa pachena kweIO 8.4, unogona kudzikisira pasina matambudziko. Kuti uite izvi, zvakanakisa kuti uteedzere dzidziso yemumwe wangu wandinoshanda naye Cristina kubva Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9 beta kuenda kuIOS 8.3.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Dzidziso kune jailbreak isina kuiswa kune iOS 8.1.2-8.4
HAZVISHANDIRI HAUDZE KUTADZIRA IYO KUTAMBUDZA NGUVA VANHU VAVA NDVAKANGOFANIRA KUTIBATA. KANA ICHOKWADI KUSIYA PAMUSORO TESE TICHANZWA. IYI NDI 100% YEMAHARA (KUEDZWA). Kwaziso
Wakatarisa? Ndeipi yako twitter? Ini ndinopfuura iwe unobata? Huya kumba kwangu ndichakuratidza iyo iPhone kana uchida.
Tsvaga usati wataura zvisina maturo. Edza kudzoreredza iyo iPhone kubva ku0 ine iOS 8.3 uye edza zvakare, uchaona kuti inoshanda sei….
Izvo hazvishande kwandiri, zvinogara zvinogara pa20%
@bueymc ndiyo yangu Twitter luke. Kana iwe ukaiyedza, ndingade kuiona nekuti haina kushandira vanhu vazhinji kana, sekutaura kwevazhinji, inoramba iri pa20% uye kubva ipapo haina kufambira mberi. Saka kana iwe ukakwanisa kundiratidza zvinogona kubatsira zvikuru. Kwaziso
ivo vanopihwa pa20% nekuti ini ndinofunga unofanirwa kubvisa icloud, bvisa password. isai munhandare yendege uye woisa zuva raJune randisingarangarire, uye nguva, ndosaka vanayo, ndinorangarira kuti ndakaita izvi, muios 8.1.2 ine taig, kwaziso!
Iyo yakashanda zvakaringana kwandiri ichibvisa kutsvaga kweangu iphone, yekubata id uye iyo yekuvhura kodhi!
kune avo vese vanokanganisa; zvese mutyairi uye 20% ... Delete itunes, zvachose. ese maapuro zvirongwa.enda kumumhanzi wangu uye mu iTunes folda, chinja kuwedzerwa kweiyo ituneslibrary.idl faira ku ituneslibrary.bak ...
Iwe unotanga PC yako, download vhezheni 12.0.1 yetunes kubva pano:https://secure-appldnld.apple.com/iTunes12/031-08058.20141016.34epp/iTunesSetup.exe
iwe unoiisa uye ndinofanira kurega iwe
Pindura ku cyanize
José Crisanto Morillon Pérez akadaro
Iri muchirungu futi http://taig.com/en/
Pindura José Crisanto Morillón Pérez
Enrique Jose akadaro
Yakashandawo kwandiri pasina matambudziko !!! Zvino mirira inoenderana tweaks kuti ibude!
Pindura Enrique Jose
Iyo yakanamatira pa20% (ini ndakagumisa zvese) uye hapana !!
Ndichiri mumwe chete, zvese zvataurwa zvadzimwa asi nanai anogara pa20%
Yakandishandira, kudzikisira kutsvaga iphone, kodhi uye zvigunwe zvemunwe
Zvakanaka, ndakabvisa zvese izvo uye zvinoramba zviri pa20%
Kana vaine makumi maviri / makumi matatu% asara imhaka yekuti vakagadzirisa OTA, saka vanofanirwa kuchengetedza nekugadzirisa ...
izvo zvinofanirwa kushanda.
Juan Fco Carretero (@ Juan_Fran_88) akadaro
Ini ndangoidzoreredza kuburikidza neTunes uye inoramba iri pa20%, ndokuti, chikonzero hachisi chekuvandudzwa kuburikidza neOTA uye ini ndakaedza katatu uye inogara iri pa3%, kunyanya, inoramba yakavharirwa mudanho rekutanga, tangazve iyo terminal kakawanda uye zvakare
Pindura Juan Fco Carretero (@ Juan_Fran_88)
Zvisinei hazvo inoramba iri pa20%, ini ndatobvisa zvese zvese uye hapana chinoshanda. Inogadziriswa sei?
Gabriel Marquez SiinMaas akadaro
saurik inofanira kugadzirisa ...
Pindura kuna Gabriel Márquez SiinMaas
Ini ndadzoreredza ios 8.3 kuburikidza neItunes uye haifanirwe kutsvaga iphone kana kodhi kana zvigunwe zvemunwe uye inoramba ichigara pa20%
Nhasi izuva rangu rekuzvarwa (ini ndine makumi maviri) uye chipo chakadii chinouya nemaChinese aya, chinoshanda zvakakwana ndinovimba mapakeji acho anovandudzwa! Kutenda kwazvo!!!!!
Christian gutierrez akadaro
Usatambise nguva yako neizvi… Hazvishande!
(Kana iwe ukatevera chinongedzo mumufananidzo, zvinokutora iwe kuenda kuChinese peji.)
Pindura kuna Christian Gutiérrez
Iwe hauzive kuti kwaTaig kunobva kupi, handiti? XD
Ramon L. akadaro
Iwe hauzive kuti iyo jailbreak iri kubva kupi, handiti? XD
Pindura kuna Ramon L.
Luis Xaviêr akadaro
Nekuti chishandiso chiChinese, shasha.
Pindura kuna Luís Xaviêr
Iko kukundikana ne 64-bit makomputa, ndosaka isu takabatwa mu20 %.Muma 32-bit makomputa anoshanda
Adrian Otero Rifat akadaro
Ndiri pa 8.1 uye ndichaenda kunogadziridza kusvika pa8.3 ikozvino JB yabuda pamberi pe8.4 yabuda
Pindura Adrian Otero Rifat
Hapana kana chinombondishandira, chokwadi ndechekuti, ndinofunga iri zano rekukasira kubuda kweios 8.4 nekuti chokwadi hachishande, handipfuure makumi maviri muzana, ndakaidzorera zvakare kuti ndione kana nechimwe chinhu chakachena kana Ndakazviita asi hapana chinoshanda usayamwa. aiwa funcaaaaaaaa usatambise simba hapana funnncaaaaaa. regerera peji racho hahahaha!
Pindura kuna Alen
Paul E akadaro
Alen kurodha pasi vhezheni ye Itunes 12.1.0 uye voila, inoshanda 100%. Tarisa chinyorwa pamberi peichi, mumwe munhu anonzi Cristhian akazvinongedza uye zvinoshanda zvakachengeteka
Pindura Pablo E
Eduardo Mendez akadaro
Shamwari ini handizive kana ndichifanira kuzviita sezvo vangoiburitsa nhasi ndiri mukukahadzika ndiudze zvandiri kutya kuita kuti ndiitore
Pindura Eduardo Mendez
Jean michael rodriguez akadaro
Ini ndinogona kuiisa paWin 7 64bit asi nechimwe chikonzero vatyairi veItune havana kundiziva mushanduro yazvino. Ini ndaifanira kusunungura yazvino vhezheni yetunes uye nekuisa vhezheni 12.0.1. Zvimwe chete zvandaifanira kuita mune yapfuura vhezheni ye TaiG (iOS 8.1.3). Asi mushure mezvese zvakajairwa, ini ndaingofanirwa kudzima kodhi yekukiya ndotsvaga yangu ipad uye ndizvozvo. Yakaiswa pane ipad mini 1
Pindura kuna Jean Michael Rodriguez
Mhoro Jean, waigona kupi kurodha pasi iTunes 12.0.1?
Parizvino ini ndichiri pa8.1.2. Ini handidi kuzvimonera. Kunze kweizvozvo kunyorera senge Semirestore haina kugadzirirwa chero. Iwe unofanirwa kumirira kuti zvese zviitwe zvepamutemo uye enda 100% mushe kana kuti ipapo kuzvidemba kunouya.
Daniel Orlando Zapata akadaro
Iyo peji reChinese rinoreva kuti iwe une yazvino iTunes uye unofanirwa kurodha vhezheni yapfuura uye pane iro peji rinokupa maTunes maviri sarudzo ye32-bit pc uye imwe ye64 ine iTunes yazvino haishande.
Pindura kuna Daniel Orlando Zapata
Kutenda kwazvo. Pane yangu iPhone 6 yakagadziridzwa ios 8.3 ini ndaive ne20% loop dambudziko. Ndakaedza pane imwe PC nekuisa iyo 32-bit iTunes kubva padanho rechipiri uye yakashanda pasina dambudziko.
Zvakafanana, zvese zvakafanana, iwe chete unofanirwa kuzviita neshanduro yetunes 12.0.1 izvozvi ndakazviita uye zvakajeka
Pindura kuna naldo
Saka iyezvino izvozvi ichave yekuisa iOS 8.3 nekuti ini ndine iOS 8.1.2, uye kumirira kuti cydia ishande nemazvo, handiti? Kana kana ios 8.4 ikabuda uye ndine iOS 8.1.2 ini handizokwanisi kupaza jeri kana paine imwe nzira yekuzviita kuburikidza ne ipa faira yeIOS 8.3 .. Mumwe munhu aigona kundizivisa kana ndikakwanisa kuzviita seizvi, kana Ini handidzorere nekukanda kune iOS 8.3
Zvino dzosera kuIOS 8.3 uye ita Jailbrake. Paunenge watove necydia yakaiswa, sezvavanogadzirisa ivo vanozo gadziridza iwe zvakare. Kana ios 8.4 ikabuda uye ivo vakavhara kushandisa, iwe unenge watove mune ios 8.3 necydia, ndiko kuti, hauzombove nematambudziko.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri saChristian Gutierrez, chii chingaitwe ????
Pindura kune Mushandisi
Ndakaedza yega yega maTunes akaburitswa uye hapana, kutanga ndakagadzirisa nyaya yevatyairi, asi ikozvino inotangazve uyezve mu20% uye hazviitike kubva ipapo zvinondikanda mushure mechinguva kukanganisa 1101 ini funga
Pindura kune rafael
Daniel Iglesias Meyer akadaro
Ndakaiisa maawa mashoma apfuura uye zviri kufamba zvakanaka, hapana dambudziko, iphone 5s
Pindura kuna Daniel Iglesias Meyer
Unoziva here kuti ichabuda riini kune mac?
Ndiri kuenda zana muzana yehupfumi ne windows 8.1 32 pa iphone 5s iwe unongofanirwa kuisa iyo yapfuura itunes ndatenda
Julian Morales akadaro
Luis Miguel Morales chigadziri chemufananidzo
Pindura kuna Julian Morales
Inoshanda inopinza pane Iphone 4s .. Yakanaka !!!
Yakandishandira, asi ikozvino ndine isina chinhu masetingi skrini, chii chandingaite?
Mune mamwe mazwi, marongero haabude, ini ndinodzvanya iyo skrini uye haina chinhu. ndokumbirawo ubatsire
Ndiani atove neJailbreak inomhanya, ndeapi ma tweaks avanayo? 🙂
Ini ndaisa chishandiso uye hachionere yangu iphone uye deactivate all touch id nekodhi, ndoitei
Pindura kuna Alvao
Inogara pa20% nekuti unofanirwa kusunungura iTunes uye kurodha pasi vhezheni, ndakazviita uye zvakandishandira, asi hei, iyo jailbreak yakaiswa asi haishande kudzamara vagadziridza iyo cydiasubstrate sezvavanotaura
Mhoro, kune vese vakamirira kuvandudzwa kubva ku saurik, hakuzovi, inoti ndeye taiG inofanirwa kubatisisa kernel kugadzirisa matambudziko ne mobile substrate
Mumwe munhu anogona kunditsanangurira kuti chii chinonzi Cydia Substrate, chakafanana necydia?
Yakandishandira ine iTunes 12.0.1, ine yazvino vhezheni yaive nedambudziko nemadriver uye neshanduro 12.1.0 yakagara pa20%
Santos Molina akadaro
Izvo zvakandipawo zvikanganiso, saka ndichaedza ne ipad mni yakachena ne8.3 uye ndine chokwadi chekuti ichakwanisa ... senguva dzose. zvirinani kudzoreredza, kupwanya kwejeri uye kumisikidza backup
Pindura Santos Molina
Mhoro. Ndakaiisa nekukopa iyo iTunes vhezheni. Ndokumbira ?? Ndine zvirongwa zvakati wandei paPC senge tomtom, kuchinjisa kune iphone zvingaitwe here? ndeyekuti zvinondipa kukanganisa
Kugona kupasa zvirongwa, nzira chete ndeyekuti uve neApplicationync?
Mushure mekuedza kuita iyo jailbreak kukuudza kuti ini ndakakwanisa kuzviita pane angu ese madivayiri (iPhone nePadad) pasina matambudziko uye kekutanga nguva kwave kuchikurumidza, ikozvino yave nguva yekuvandudza iyo cydia substrate uye kumhanya.
PS Ini ndakazviita ne imac ine boot camp uye ndinokunda 8.1
Ini handikwanise kuzviita, ndinowana meseji yekuti ndinofanira kuisa chimwe chinhu muTunes, ndokumbirawo ubatsire !!!
Pane chero munhu anofunga kuti ivo havagone kuisa chero chinhu kubva kuApp shop? Ini ndavhunika mujeri uyezve hazvindibvumidze kuisa kana kugadzirisa
Yakatogadziriswa, yaive cydia tweak
Kune avo vanokundikana uye vanogara pa20%, tarisai chikamu chekuchengetedza. Bvisa zvese, kusanganisira "yakapusa kodhi." Mushure meizvozvo zvakandishandira.
Edza uye urikureva, kuti uone kana zvirizvo, kuti vanhu vazhinji varasika.
20% apple driver driver - mhinduro Download vhezheni yeItunes.
Pakarepo mushure mekuputsika kwejeri, gadziridza YESE Cydia (inogona kunge iri nhema skrini uye hapana imwe sarudzo kunze kwekudzorera zvese)
Ipapo iwe unofanirwa kuisa data yeaccloud account kuti AppStore iwanikwe (haishande chete mukudzoreredza kana pakutanga)
Zvese pa100% kunyangwe muIFUNBOX ini ndisingakwanise kumisikidza tunnel yeUSB kana kuisa mudzi wesystem.
Ami iyo itune inondivhurira, ini handivhure hwindo kuyera iyo jailbreak iyo inobatsiraooooo inobatsira
J Eduardo akadaro
Yakandishandira kekutanga, ini ndaingofanirwa kuburitsa yazvino iTunes, ese maApple zvirongwa uye nekuchinja iyo iTunesLibrary yekuwedzera. Ipapo ichaisa vhezheni 12.0.1 uye kudzima yangu anti hutachiona.
Bvisa yangu Wifi, kiyi kodhi uye «Tsvaga yangu iPhone»
Mhanya chirongwa semurairidzi uye voila, yaive yakakwana.
Ipapo ini ndakawana iyo Cydia yekumisikidza yekuvandudza kune yazvino iyi. Parizvino ini ndangodhaunirodha mamwe ma tweaks andaona paInternet anoenderana neIOS 8.3 kunyangwe ndingade kuona kana paine madingindira eiyi vhezheni nekuti ini handisi kuawana.
Pindura kuna J Eduardo
Zvakaipa ndezveWindows chete!
Pindura kune latostadorano
Mhoroi, ndaedza asi yangu iphone 6 haina kundiziva, zvinondiudza kuti handina madhiraivha akaiswa. Ini ndaisa itune 12.0.1 ndobva ndaisa yazvino uye hapana. Unoziva here kuti chingave chii? Ndakaedza pamakomputa maviri uye hapana, mhinduro imwe chete.
John jairo jaramillo akadaro
Izvo hazvishande mune chaiyo muchina maparole muMAC kana mumwe munhu akandibatsira zvirinani kukwazisa kubva kuSpain
Pindura kuna John Jairo Jaramillo
muchina chaiwo mawindows 7
Izvo zvinogara zvichinditadzisa pa60% ini ndiri kuzodzoka kunodzosera uye kuyedza zvekare. Nenzira iyoyo ivo vanoratidza kuti iwe unofanirwa kuisa modhi yendege. Ndakaedza uye zvinoramba zvichinditadza. Zvinotora semaminetsi gumi kusvika 10%
Kana uchigadzirisa ita yakachena kudzoreredza. Saka kana ichishanda nemazvo.
Ndakaita jailbreak pa ipad uye ne iphone 5s, mune yekupedzisira kana ndichitanga cydia ndinowana yakakosha yekugadzirisa, ndinoigamuchira, iyo inotenderera inotangazve uye inorova desktop ye mobile, hapana chinoonekwa, chete saver screen uye Izvo hazvishande, ndinodzokera kunodzorera, ita jailbreak uye isa backup kopi yekupedzisira, chinhu chimwe chete, ini ndanga ndatove katatu nekakafanana, zvese zvakakwana pane ipad mini3. zvinoitika kune mumwe munhu
John A. akadaro
Mhoroi, ndakaita zvinotevera ne iphone 5s uye yakashanda zvakakwana. Zvakareruka kwazvo: Ndakavhara Itunes uye ndokutanga ku jailbreak maererano nedzidziso. Ari kuzogara pa60% kwenguva yakareba asi hazvina basa, ngaabude hake. Zvakanditorera kweinenge awa nehafu kusvika kumaawa maviri kuti ndipedze asi iwe unowana basa raitwa. Kwaziso
Pindura kuna John A.
Mudziyo wangu haundione, zvinoti nekuti mutyairi weapuro haawanikwe, chii ichocho? Izvo zvandinofanira kuita? ndokumbirawo ubatsire.
iwe unofanirwa kudhawunirodha yazvino vhezheni vhezheni yetunes zvimwe 12.0.1 neiyi inoenda zvakanaka
Zvinoitika kwandiri zvakafanana naAlejandro
Iko kukanganisa kumwe kunoitika kwandiri sevamwe .. vatyairi havandizive ini, chero rubatsiro?
Kana ichishanda kana yakavharwa pa20, ipe kubvisa chirongwa asi usingaite, iwe unopa bhatani chairo kudzoka uye zvichingodaro kusvika zana, ini ndaifanira kuipa ka100
Mhoroi vanhu vese. Ndinochida, zvese zvakandishandira, chete substrate yekumisikidza ini handina kuzvinzwisisa asi haina kana chainoita
Ndiregerere, ndeipi vhezheni yeTunes yauri kushandisa ku jailbreak? … Ami ndinowana yambiro nezve iTunes uye zvinondipa chinongedzo!
Ndakazviita pasina matambudziko ne iTunes 12.0.1.26, ine yazvino vhezheni yandaisakwanisa nekuti yakakanda chikanganiso
Pindura kuna Aleg1422
Mhoroi, ndingawanepi kupi iTunes 12.0.1 ???
Kwaziwai shamwari ndine jailbreak muna 8.4 yanga ichishanda zvinoshamisa kunze kwekunze cydia yakandimisa kuvhura chero mhinduro kunze kwekudzorera yekutenda
dzese dzakadamburwa, modhi yendege uye inogara pa50%
chichava chii ????
Maitiro ekuita iyo iPhone kuverenga kuverenga zvinonzwika
TaiG inoburitsa Asina kubvumidzwa ejeri kupaza kweiyo iOS 8.3